Iimpawu kunye nebhayoloji yenqanawa | Ngeentlanzi
Phakathi kwezilwanyana ezifumaneka kwimilambo sinazo al Unonkala womlambo. Yi-decapod arthropod enomzimba ogqunywe liqokobhe. Eli qokobhe lithathwa njengendawo exoskeleton kwaye iyazikhusela. Ayifani nathi, endaweni yokuba sinamathambo ngaphakathi, sinawo ngaphandle. Kwi-gastronomy, inyama ye-crab iyimfuneko kakhulu kwaye oku kuthetha ukuba ubukho bayo bunokuba sesichengeni.
Kweli nqaku siza kukuxelela malunga neempawu kunye nendlela yobomi be-crayfish ukuze ufunde okungakumbi ngayo.
2 Imisebenzi yomzimba
3 Indawo yokuhlala yendalo
4 Ukondla nokuzala kwe-crayfish
Ingxangxasi egutyungelwe yinto enzima kwaye iyasebenza ukuzikhusela. Yenziwe ikakhulu ngecalcium. Inika umzimba wonke uqhekeke ngokwamacandelo avumela ukuba ushukume kwaye ujikeleze iziza ezingaphakathi emlanjeni. Amacandelo aphambili angaphandle nangasemva, okwabizwa ngokuba yi-cephalothorax kunye nesisu. Kwindawo engaphandle yintloko kunye nesifuba esahlulwe sulcus yomlomo wesibeleko.
Ngakolunye uhlangothi, sinayo ye-carapace eyandisiweyo kulwandiso apho kufakwa khona amehlo. Umlomo wayo ubekwe kwindawo yentloko kwaye ujikelezwe yimilenze enceda isilwanyana ukuba sihambe.
Unonkala ozenzekelayo ufumaneka emilanjeni kulo lonke usingasiqithi kwaye zihlala zibonakala ngokulula njengoko zinemilenze emi-5 emacaleni nakwindawo ye-cephalothorax. Imilenze emibini yokuqala iye yavelisa iinzipho ezenzelwe ukuzikhusela nokubamba ukutya. Mhlawumbi yile nzipho eyenza ukuba oononkala babe luphawu kwaye badume ngazo.
Ezi zibini zilandelayo zemilenze zikwanazo ne-clamp kodwa zincinci kakhulu ngobukhulu kuneyokuqala. Eyokuqala zezona zibalulekileyo kwaye ziluncedo kwizilwanyana. Iibini ezimbini zokugqibela zemilenze zinenzipho eziyisebenzisela ukubambelela ngokukuko kunye nozinzo xa zihamba.
Zonke izibini zemilenze zisetyenziselwa ukuhamba ngaphandle kowokuqala, osoloko ekulungele ukuzikhusela okanye ukuhlasela ixhoba.
Iimpondo zilungelelaniswe ekupheleni kobuso kwaye zinee-antellenule ezincinci. Ezi eriyali zinoncedo lokuba lilungu ezithi ziqhelane nokusingqongileyo kwaye zibe nomsebenzi woluvo. Ukongeza, kuyanceda ukugcina ibhalansi yakho kakuhle kwaye ukwazi ukuziva yonke into ekujikelezile.
Inkqubo yokuphefumla isebenza ngenxa yemigulukudu enamagumbi amabini ahlelwe kumacala omabini omqala onayo i-cephalothorax. Isisu saso sinamacandelo amathandathu anokutshintshwa kwaye sinezihlomelo. Ezi zihlomelo zenziwe nge-biremean kwaye ziphuhliswe kakuhle. Kwicandelo lokuphela kwetelson ngumsila wokuqubha onamandla. Yiyo le nto eyenza i-crayfish ibe yindadi elungileyo kwaye ingashukuma ngokulula nangona umlambo unamandla athile.
Umthamo woononkala kufuneka onele ukuze baphile kwimeko apho amanzi ahlala omelele khona. Umzekelo, xa kukho iimvula ezinkulu, ukuhamba komlambo kukhula kakhulu kwaye oononkala kufuneka bazilungiselele ukusinda kwezi meko.
Ngokubhekisele kwinkqubo yokwetyisa, inobulumko. Ukusuka ngaphandle unokubona kuphela i-anus esecaleni kwitelson.
Ukwahlula oononkala abangamadoda nabasetyhini, kufuneka kubekho umahluko phakathi kweempawu zesini. Emadodeni, le mingxunya ivulekileyo kumacala asisiseko emilenze yokugqibela kunye nakwizibini ezimbini zokuqala indawo ekhutshelweyo ekhoyo. Kwababhinqileyo, ii-orifices zesini zikwimilenze yesithathu kwaye ezinye ziyancitshiswa okanye azikho.
Indawo yokuhlala yendalo
I-crayfish ayifuni kakhulu ngokwemiqathango ekufuneka iphile ngayo. Ihlala kuwo onke amanzi emilambo yaseSpain anokuhamba okwaneleyo. Nangona inganyanzelisi kakhulu, ikhetha ukuba amanzi atyebile ngeetyuwa zekhalsiyam ukomeleza indawo yayo engaphandle kunye izixa zeoksijini echithakeleyo phakathi kwe-3 kunye ne-12 mg / l.
Ngokubhekiselele kumaqondo obushushu, Kufuneka babe kuluhlu phakathi kwe-8,5 ukuya kuma-22 degrees. I-crayfish isebenza njengesalathisi sendalo esingqongileyo kumgangatho wamanzi anayo imilambo yethu, kuba ukuba ingcolisekile asizukuyibona. Nangona inamandla okumelana nemisinga eqinileyo, ikakhulu siyibona isasazwa kwiindawo apho isantya samanzi sihamba kancinci. Amazantsi omlambo anokutshintsha kwaye abekwe kwiindawo ezingenzulwanga nakwezinye iindawo ezinzulu.
Akazithandi iindawo eziqaqambe kakhulu ngenxa yoko uthatha ithuba lokuzifihla kutyani lwemilambo. Ngamanye amaxesha ngeepleyiti zayo inokwenza umngxuma ngokumba ukuba izoyikiswa. Inokufihla nakwezinye iithambeka zebhanki okanye phantsi kwamatye amakhulu.
Umsebenzi wayo omkhulu wenzeka ebusuku apho ukukhanya kungenzi ukuba ubhaqwe lixhoba lawo. Ixesha lonyaka xa lisebenza kakhulu liphakathi kwentwasahlobo nasekwindla, lonke unyaka lisebusuku kwindawo yayo yokufihla ekhuselekileyo rhoqo.
Ukondla nokuzala kwe-crayfish
Aba nonkala batya phantse yonke into. Bandakanya kwisidlo sakho iintlanzi ezincinci, ukubola kwezinye izilwanyana, izibungu zasemanzini, izilwanyana ezinkulu, izityalo zasemanzini kunye nealgae. Phakathi kwezona zilwanyana zibalulekileyo ekufuneka uzilumkele ziinambuzane ezikwicoleopteran kunye ne-odonata, ezinye iintlanzi ezinkulu, iintaka kunye nezinye izilwanyana ezifana neetter.
Ngokumalunga nokuzala kwayo, ixesha lokuzala liqala ngaphambi kobusika apho ibhinqa Iyakwazi ukubeka phakathi kwamaqanda angama-40 ukuya kuma-80 phantsi kwesisu kwaye imiswe kwimilenze yayo. Iyayikhusela ngelixa ifukama de amaqanda aqandusele intwasahlobo elandelayo.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyanceda ekufundeni ngakumbi malunga ne-crayfish esinayo usingasiqithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Unonkala womlambo